အကြိမ် ၂၁ မြောက် အစဉ်လာမပျက် ဂျပန် မှ မင်္ဂလာဒိုး အနုပညာအင်အားစုမှ ရဲရဲတောက်တေးသံချပ်များ စတင်ဖြန့် ချီ ….
2013 မင်္ဂလာဒိုးအနုပညာ အင်အားစု (ဂျပန်) အဖွဲ့ ၏ရဲရဲတောက်တေးသံချပ်များ 2013ခုရဲ့ မြန်မာပြည် သင်္ကြန် အမှီ တင်ဆက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နိုင် ရန် အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မင်္ဂလာဒိုး အနုပညာအင်အားစု မှ
နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကြ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ ရိုးရာ သင်္ကြန် ပွဲ များတွင် တင်ဆက်နေကျ ဒိုးပတ်သံ များဖြင့် နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာမိသားစု များနှင့် မြန်မာပြည်တွင်းမှ အောင်ပွဲရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ကိုထောက်ခံအားပေးနေသော
မိဘပြည်သူများအတွက် စိတ်သောက ကင်းဝေး နိုင်စေရန် နှင့် ဒုက္ခ အပေါင်းမှ ကင်းငြိမ်းစေရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် အစဉ်လာမပျက် တနှစ်တခေါက် အတို့ အထိ ရိ စရာ လေးများနှင့်
မှန်မှန်ရောက်ရှိလာတဲ့ မင်္ဂလာဒိုး ရဲ့ သံချပ်များ အများပြည်သူများ ရှေ့မှောက်သို့ ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ၊၊ ယခု နှစ်သံချပ်များကို ၊ကိုမျိုးသန့် ၊ကိုသောင်း၊ကိုအေးမင်းကို၊ ခင်ငြိမ်းဆွေ နှင့် ကိုထွန်းဝေတို့ မှရေးသားခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊၊2013 တွင်လည်း
၈။ဗမာစာသည် တို့ စာ
တေးသံချပ်များ ဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်းမှ မိဘရဟန်းရှင် ပြည်သူများ ကြည့်ရှု့ နိုင်စေရန်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အတာသင်္ကြန် မရောက်ခင်မှာ သံချပ် သီချင်းခွေ ဗွီဒီယိုတွေ ထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာကို ဖြန့်ချိခဲ့တာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သင်္ကြန်နှင့်အတူ နှစ်စဉ်ဧပြီလတွင်ကျင်းပနေကြ တိုကျိုသင်္ကြန်ပွဲတော်သည် ဧပြီ7ရက်(7.4.2013)တွင်ကျင်းပမည်
ဟု မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် မှ ဥက္ကဌ ဦးလှိုင်အေး က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာပြည်အလွမ်းပြေ ယိမ်းအကနှင့် ဒိုးပတ်သံများဖြင့်
ဝေေ၀ဆာဆာ မြူးမြူးကြွကြွ တင်ဆက်ထားသည်ကို တွေ့ ရမှာဖြစ်ပြီး မကြာမီအင်တာနက် စာမျက်နှာ များတွင် ဗွီဒီယို ဖြင့်တစ်ဝကြီး
ကြည့် ရှု့နိုင်ရန်စီစဉ်လျက် ရှိပါသည်။ယခုနှစ် တိုကျို သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် လည်း မင်္ဂလာဒိုးမှအဖွဲ့ ဝင် များဖြင့် ခြိမ့် ခြိမ့် သဲ ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ပြီး
ဦးမျိုး သန့်08050632509 နှင့် ၊ ကိုထွန်းဝေ 07066369696 kotunwai@gmail.com , တို့ ကို ထံ မေးမြန်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း
ဗွီဒီယို.ရိုက်ကူးတည်းဖြတ် ကိုဇေယျာအောင် (ဂျပန်)
ဒီနေရာတွင် ဒေါင့်လော့ယူပြီး ကြည့်ရှု့ နိုင်ပါတယ်။
http://youtu.be/knxbngnbtIY ၂၀၁၃ မင်္ဂလာဒိုး တေးသံချပ်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/02/2013
“ဝီရသူ သဘောထား ၁၄/၇၄”
“ဦးဝီရသူကို ပြန်လည်ထိမ်းသိမ်းဖို့ စီစဉ်နေခြင်းလော...
နျူကလီယား စက်ရုံတွေ ပြန်ဖွင့်ဖို့ မြောက်ကိုရီးယား ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်္ကာပူသမ္မတအားလက်ခံတွေ့ ဆုံ
The First Weekly Journal အားလက်ပံတောင်းဒေသတုံရွာမှ...
၄၈ လမ်း ဗလီမှာ လောင်တဲ့မီး ဘာမီးလဲ
သေဆုံးသူ အစ္စလန် ဘာသာဝင် ကလေး များကို ရေဝေးသုသန်...
အကြမ်းဖက်အဓိကရုဏ်းလက်သည် ဘယ်သူလဲ? ဖေါ်လိုက်ပြီ(နိဂ...